Qaramada Midoobay oo canaan u jeedisay Kenya |
Qaramada Midoobay oo canaan u jeedisay Kenya
Hay’adda Qaxootiga Aduunka UNHCR ayaa walaac xoogan ka muujisay dib u soo celin aan loo meeldayin taasi oo lagu hayo Soomaalida ku Nool Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya iyadoona Hay’adda canaan kulul u jeedisay Madaxda Dalka Kenya.
9-kii April, waxaa Magaalada Nairobi laga soo daabulay ku dhawaad 82 oo Soomaali ah kuwaasi oo lagu sheegay in aysan heysan Aqoonsiga ama Dhalashada Dalka Kenya waxaana la keenya Magaalada Muqdisho, sidaasi waxaa lagu yiri War ka soo baxay UNHCR.
“17-kii April, Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray ugu yaraan 91 Ruux oo u badnaa Haween, Caruur iyo Dad da’ah kuwaasi oo laga soo raafay Dalka Kenya, howlgalladan maahan mid wanaagsan hala joojiyo”waxaa sidaasi yiri Madaxa ugu sareya UNHCR.
Sidoo kale, Madaxa ugu sareya UNHCR ayaa sheegay in Howlgallada ay fulinayaan Ciidamada Booliska Kenya aysan ahyen kuwa ku socdo si xasiloon balse ay saameyn ballaaran ku raabtay Soomaalida Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi .
Waxaa Hay’adda UNHCR ay shaaca ka qaaday 25 Bishii march aanu soo dhaafnay in Caruur Agoon ah oo laga kaxeeyay Magaalada Nairobi islamarkaana loo gudbiyay Xerayaha Qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakumo ay la soo daristay Xaalad Nolol xumo oo aad u liidata.
Ugu dambeyn, Hay’adda Qaxootiga Aduunka UNHCR ayaa ku canaanatay Madaxda Dowladda Kenya ay in ay joojiyaan raafka Magaalada Nairobi loogu geysanayo Soomaalida halkaasi ku Nool